ဒီဗွီဘီ ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်သူ( ၂ ) ဦး နံမည်နှင့်တကွ ငွေစာရင်း​များ​၊​ သက်​သေ အ​ထောက်အထား​များ​ ပေါ်ကုန်ပါပြီး
ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဘတ်​ငွေ နှစ်သန်း​ခုနစ်သိန်း​ဖြင့်၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူခဲ့သည့် ဘန်ကောက်မြို့ နေအိမ်
၁။ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ ပြည်တွင်း​သတင်း​လုပ်ငန်း​ကို ဦး​ဆောင်သူများ​က လုပ်ငန်း​အတွက် သတ်မှတ်​ပေး​ထား​သော အဖွဲ့​အစည်း​ပိုင် ​ငွေများ​ကို အလွဲသုံး​စား​ပြုလုပ်​နေ​ကြောင်း​ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ အုပ်ချုပ်​ရေး​ တာဝန်ရှိသူများ​ဖြစ်သည့်​ ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​နှင့်​ လက်​ထောက်ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​တို့​က အ​ထောက်အထား​အခိုင်အမာ ​တွေ့​ရှိခဲ့​သည်။ ​ငွေ​ကြေး​စီမံခန့်​ခွဲ​ရေး​ အပါအဝင် မြန်မာပြည်တွင်း​သတင်း​လုပ်ငန်း​ကို ဦး​ဆောင်တာဝန်ယူသူ ဦးမျိုး​မင်း​နိုင် (အမည်ခွဲများ​- ကို​နေထွန်း​၊​ ကိုနန္ဒ၊​ ကိုမျိုး​ကြီး​) နှင့်​ ဦး​အောင်မျိုး​ကျော် (အမည်ခွဲများ​- ပွကြီး​၊​ အရှည်​လေး​) တို့​နှစ်ဦး​သည် မမှန်ကန်​သော ​ငွေစာရင်း​များ​တင်ပြကာ ပုဂ္ဂိုလ်​ရေး​ အကျိုး​စီး​ပွား​အတွက် အဖွဲ့​ပိုင်​ငွေ​ကြေး​များ​ကို မတရား​ရယူ​နေ​ကြောင်း​ သက်​သေ အ​ထောက်အထား​များ​အရ သိရသည်။ ထို့​ကြောင့်​ ယမန်နှစ် စက်တင်ဘာလက ထို​ငွေ​ကြေး​အလွဲသုံး​စား​မှုကို အုပ်ချုပ်​ရေး​ တာဝန်ရှိသူများ​က ဘုတ်အဖွဲ့​သို့​တင်ပြခဲ့​သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဘုတ်အဖွဲ့​က အဆိုပါ ​ငွေ​ကြေး​အလွဲသုံး​စား​မှုကို တာဝန်ယူ စုံစမ်း​ဖော်ထုတ်ခဲ့​သည်။
၂။ လွတ်လပ်၍ သမာသမတ်ကျ​သော စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​မှုကို ဦး​တည်​သောအား​ဖြင့်​ ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​ ဦး​အေး​ချမ်း​နိုင်နှင့်​ လက်​ထောက် ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​ ဦး​ခင်​မောင်ဝင်း​တို့​သည် စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​မှု ပြီး​သည်အထိ စီမံခန့်​ခွဲ​ရေး​တာဝန်မှ ယာယီရပ်နား​ပြီး​ အသံလွှင့်​လုပ်ငန်း​ပိုင်း​ကိုသာ တာဝန်ယူခဲ့​သည်။ ထိုကာလအတွင်း​ ဒီဗွီဘီ စီမံခန့်​ခွဲ​ရေး​ကို တာဝန်ယူရန် ယာယီ ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​မှူး​အဖြစ် ဦး​ဟန်​ညောင်​ရွှေနှင့်​ ယာယီရုံး​အုပ်ချုပ်​ရေး​မှူး​အဖြစ် Ms. Vibeke Hermanrud တို့​ကို ခန့်​အပ်တာဝန်​ပေး​ခဲ့​သည်။
၃။ စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​မှုပြုလုပ်ရန် Price waterhouse Coopers (PwC) ကို ငှား​ရမ်း​ခဲ့​သည်။ ​နော်​ဝေး​ နိုင်ငံနှင့်​ ထိုင်း​နိုင်ငံတို့​တွင် အ​ခြေစိုက်​သော PwC ရုံး​ခွဲများ​မှ စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​ရေး​မှူး​ ​ခြောက်ဦး​သည် ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလဆန်း​မှစ၍ စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​ခဲ့​သည်။ ​အော်စလိုမြို့​ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ ရုံး​ချုပ်ရှိ ဝန်ထမ်း​များ​ကို ပထမ​မေး​မြန်း​ပြီး​ ​ငွေစာရင်း​များ​၊​ သက်​သေ အ​ထောက်အထား​များ​ကို စစ်​ဆေး​ခဲ့​သည်။ ​နော်​ဝေး​ PwC ရုံး​မှ စစ်​ဆေး​ရေး​မှူး​နှစ်ဦး​နှင့်​ ထိုင်း​နိုင်ငံ PwC ရုံး​မှ စစ်​ဆေး​ရေး​မှူး​ တဦး​တို့​က နိုဝင်ဘာလလယ်ပိုင်း​တွင် ထိုင်း​နိုင်ငံအတွင်း​ စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​ခဲ့​သည်။
၄။ ယခုအခါ PwC က ၎င်းတို့​စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​ ​တွေ့​ရှိချက်များ​ကို အစီရင်ခံစာ ​ရေး​သား​ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အဓိက ​တွေ့​ရှိချက်များ​ထဲတွင် ​အောက်ပါအချက်များ​ ပါဝင်သည်။
(က) ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ၏ ပြည်တွင်း​ သတင်း​လုပ်ငန်း​ ကွန်ရက်ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် တည်​ထောင်ချိန်မှစ၍ အခုအချိန်ထိ တာဝန်ယူကြီး​ကြပ်​နေ​သော ​အော်စလိုအ​ခြေစိုက် တာဝန်ခံ ဦးမျိုး​မင်း​နိုင် (အမည်ခွဲများ​- ကို​နေထွန်း​၊​ ကိုနန္ဒ၊​ ကိုမျိုး​ကြီး​) နှင့်​ ပြည်တွင်း​သတင်း​လုပ်ငန်း​အတွက် ​ငွေ​ကြေး​ကို မဲ​ဆောက်မှ ကြီး​ကြပ်သူ ​ဦးအောင်မျိုး​ကျော် (အမည်ခွဲများ​- ပွကြီး​၊​ အရှည်​လေး​) တို့​ နှစ်ဦး​မှာ အလွဲသုံး​စား​လုပ်သူများ​ ဖြစ်​ကြောင်း​ PwC အစီရင်ခံစာ က ​ထောက်ပြထား​သည်။
(ခ) အလွဲသုံး​စား​လုပ်ခဲ့​သည်ဟု PwC က အတည်ပြု​သော ​ငွေပမာဏမှာ ​နော်​ဝေး​ငွေ က​ရောင်း​ ၂,၂၁၈,၁၄၁၊​ (အ​မေရိကန်​ဒေါ်လာ ၃၆၉,၀၇၅၊​ မြန်မာကျပ် ၃၁၀,၀၀၀,၀၀၀) ဖြစ်သည်။ အလွဲသုံး​စား​ ပြုလုပ်ခံရ​သော ​ငွေများ​မှာ ပြည်တွင်း​နှင့်​ မဲ​ဆောက်ရုံး​တာဝန်ကျ သတင်း​ထောက်နှင့်​ ဝန်ထမ်း​များ​၏ လစာ​ငွေများ​၊​ ဖမ်း​ဆီး​ခံထား​ရ​သော ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့​အသံ သတင်း​ထောက်များ​၏ မိသား​စုများ​အတွက် ​ပေး​သော ​ထောက်ပံ့​ငွေများ​၊​ ရုံး​ခန်း​ငှား​ခများ​နှင့်​ လုပ်ငန်း​ လည်ပတ်စရိတ်အတွက် သတ်မှတ်​ပေး​ထား​သော ​ငွေများ​ဖြစ်သည်။
(ဂ) အလွဲသုံး​စား​လုပ်၍ စု​ဆောင်း​ရရှိ​သော ​ငွေများ​ဖြင့်​ ထိုင်း​နိုင်ငံနှင့်​ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိမ်များ​၊​ တိုက်ခန်း​များ​၊​ ​မော်​တော်ယာဉ်များ​၊​ ​မြေကွက်များ​ ဝယ်ယူထား​သည့်​အပြင် ​လောင်း​ကစား​နှင့်​ အခြား​ စီး​ပွား​ရေး​လုပ်ငန်း​များ​ကိုလည်း​ လုပ်​ဆောင်​နေသည်။
(ဃ) အကျဉ်း​ထောင်အသီး​သီး​တွင် ​ထောင်ချခံခဲ့​ရသည့်​ ဒီဗွီဘီ သတင်း​ထောက်များ​နှင့်​ မိသား​ဝင်များ​အတွက် ​ထောက်ပံ့​ငွေများ​ကိုအလည်း​ အလွဲသုံး​စား​ လုပ်ခဲ့​ကြသည်။
၅။ အလွဲသုံး​စား​ငွေများ​ထဲမှ ဘတ်​ငွေ နှစ်သန်း​ခုနစ်သိန်း​ဖြင့်​ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဝယ်ယူထား​သော ဘန်​ကောက်မြို့​ရှိ အိမ်တလုံး​ကို ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံက ပြန်လည်သိမ်း​ယူထား​ပြီး​ဖြစ်သည်။ ကျန်​နေ​သေး​သော အထက်​ဖော်ပြပါ ပစ္စည်း​များ​ကို သိမ်း​ယူနိုင်ရန် ဆက်လက်​ဆောင်ရွက်သွား​မည်။
၆။ စုံစမ်း​စစ်​ဆေး​မှု စတင်ကတည်း​က ​ဖော်ပြပါ အလွဲသုံး​စား​ လုပ်သူများ​သည် သူတို့​အ​ပေါ် နိုင်ငံ​ရေး​ လုပ်ကြံမှုဖြစ်​ကြောင်း​ ​ကောလာဟလသတင်း​များ​ လွှင့်​ခဲ့​သည်။ ပြည်တွင်း​သတင်း​ ကွန်ရက်တွင် တာဝန်ထမ်း​ဆောင်​နေ​သော သတင်း​ထောက်များ​နှင့်​ နိုင်ငံ​ရေး​အဖွဲ့​များ​အကြား​ သတင်း​မှား​များ​ ဖြန့်​ချိကာ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ အကွဲအပြဲဖြစ်သ​ယောင် လုပ်​ဆောင်​နေသည်။ ၂၀၀၇ ​ရွှေဝါ​ရောင် ​တော်လှန်​ရေး​အတွင်း​ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ သတင်း​ထောက်များ​၏ စွန့်​စား​လုပ်​ဆောင်ချက်များ​ကို မှတ်တမ်း​တင်ထား​သည့်​ “Burma VJ” မှတ်တမ်း​တင် ရုပ်ရှင်ကား​ အမည်ကို အသုံး​ပြုပြီး​ Burma VJ Media Network ဟု ​ခေါ်​သော အဖွဲ့​ကို တည်​ထောင်ထား​သည်။ ထို့​အပြင် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံက ထုတ်​ပေး​ထား​သော ပစ္စည်း​ကိရိယာများ​၊​ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ မူပိုင်ဖြစ်​သော archive ဗွီဒီယို၊​ ဓာတ်ပုံနှင့်​ အခြား​ အ​ရေး​ကြီး​ သတင်း​အချက်အလက်များ​ကိုလည်း​ ပြန်လည်အပ်နှံခြင်း​မရှိဘဲ သိမ်း​ယူထား​ဆဲဖြစ်သည်။ ဒီဗွီဘီပိုင် ပစ္စည်း​များ​အား​ အလွဲသုံး​စား​ လုပ်ထား​ခြင်း​အ​ပေါ် ဆက်လက် အ​ရေး​ယူ​ဆောင်ရွက်သွား​မည်။
၇။ အခက်အခဲများ​စွာကို ရင်ဆိုင်ကာ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံတွင် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်း​ဆောင်​နေ​သော ပြည်တွင်း​သတင်း​ကွန်ရက်မှ သတင်း​ထောက်များ​အား​လုံး​ကို ချီး​ကျူး​ဂုဏ်ပြုပါသည်။ အဖြစ်မှန်ကိုသိ၍ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့​အသံနှင့်​ ပြန်လည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်လို​သော ဒီဗွီဘီ သတင်း​ထောက်များ​အား​လုံး​ကို ဖိတ်​ခေါ်ပါသည်။
၈။ ဘုတ်အဖွဲ့​က ဦး​အေး​ချမ်း​နိုင်နှင့်​ ဦး​ခင်​မောင်ဝင်း​တို့​ကို ၎င်းတို့​ယာယီနုတ်ထွက်ထား​သော ရာထူး​များ​ဖြစ်သည့်​ ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​နှင့်​ လက်​ထောက်ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​ ရာထူး​များ​တွင် ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်​နေ့​ကတည်း​က အသီး​သီး​ ပြန်လည်ခန့်​အပ်ထား​ပြီး​ ဖြစ်သည်။
1. Mr. Harald Lars Bøckman, ဘုတ်အဖွဲ့​ဥက္ကဋ္ဌ၊​ harald.bockman@sum.uio.no, +47 94143838
2. Mr. Eirik Vinje, Attorney-at-law, ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့​အသံ​ရှေ့​နေ၊​ ev@gmco.no, +47 92 88 67 79
3. ဦး​အေး​ချမ်း​နိုင်၊​ ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​၊​ acn@dvb.no, +47 91107743
4. ဦး​ခင်​မောင်ဝင်း​၊​ လက်​ထောက်ဦး​ဆောင်ညွှန်ကြား​ရေး​မှူး​၊​ kmw@dvb.no, +47 45276649
ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်​နေ့​၊​ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ ​အော်စလိုမြို့
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, January 21, 2012
ယခု ချိန်ထိ တောင်သူလယ်သမားတွေကို မတရားတာတွေ လုပ်နေတုန်းပါလား...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီ
အကြောင်းအရာ ။ ။ တောင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာထွက်သီးနှံများအား ၀ယ်ယူပြီး
ကျွန်တော်ဦးသိန်းဟံ (KYN.၀၈၆၃၆၁) ရန်ကုန်တိုင်း ၊ ခရမ်းမြို့နယ် အိုးဝကျေးရွာနေထိုင်သူနှင့်အပေါင်းအပါ (၂) ဦးကျော်ဦး (KYN.၁၁၁၁၆၇) (၃) ဦးကျော်ဦး (၄) ဦးတင်ရွှေ (၅)ဦးသောင်းကြည်နှင့် (၆) ဦးစောငွေတို့ ထံမှ ကံသာကျေးရွာနေ ကိုလှကျော်ဆိုသူမှ ၁.၂.၂၀၁၁လယ်ယာထွက် ဖရဲသီးများအား တရက်၂ရက်အတွင်းပေးချေမည်ဟုဝယ်သွားပါသည်။သို့သော်၅လခန့်ကြာသည့်တိုင်အောင် ဖရဲငွေမရသည့် အတွက် ကိုလှကျော်နေထိုင်သော ကံသာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သော ဦးအောင်ဆန်းဝင်းထံ တိုင်ကြား၍ တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ နှစ်ကြိမ် ရက်ချိန်းပေးပါသည် ။ သုံးကြိမ်မြောက်သောအခါ မပေးနိုင်ကြောင်း တိုင်ချင်ရာတိုင်ဟု ဦးလှကျော်မှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှေ့တွင် ပြောပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဘုရားပျိုစခန်းမှူးထံတွင် တိုင်ကြားခဲပါသည်။ ဘုရားပျိုစခန်းမှ ခရမ်း မြို့နယ်တရားရုံးသို့ ၆လပိုင်း၁၀ရက်နေ့တွင် ဆက်လက်တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။
အမှုဖွင့်ကာ အရေးယူပါသော်လည်း (၂၀၁၁-ကြီး-အမှုအမှတ် ၁၈၆-ဇွန်လ-၁၀ရက်)နေ့စွဲဖြင့်အမှုဖွင့်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ယခုတိုင်အောင် ထိရောက်စွာအရေးယူမှု မရှိခဲ့သည့်အပြင် နစ်နာသူကျွန်တော် တို့လယ်သမားများကိုလည်း အမျိုးမျိုးချိန်းဆိုမှုကြောင့် ခရီးစရိတ်နှင့် လုပ်အားများများစွာ နစ်နာလျှက်ရှိပါသည်။အမှုကို တရားရုံးမှ ယခုတိုင် စီရင်ချက်မချဘဲ တရာခံကိုလှကျော်မှာလည်း ယခု တိုင်လယ်သမားများ ထံမှ ဖရဲသီးများကို လက်ငင်းပေးစနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူလျှက်ရှိပါသည်နစ်နာခဲ့ရသော ကျွန်တော်တို့ လယ်သမားများမှာ အစိုးရမှ ဘဏ်ချေးငွေ များ ပြန်လည်တောင်းခံ ချိန်တွင်ငွေကြေးအကျပ်အတည်းများဖြင့် ရင်ဆိုင်တွေကနေရပါသည်။ ထို့ကြောင့် တာဝန်ရှိသူသက်ဆိုင်ရာမှ စစ်ဆေးပြီးထိရောက်စွာအရေးယူရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။
ရုံးတွင် တိုင်ကြားခဲ့သည်မှာလည်း (၆)လရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသော်လည်း မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်မှမချပဲ ရုံးချိန်းသာ ခဏခဏခေါ်နေခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှ ကျွန်တော်တို့ လယ်သမားများဘက်မှ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တိုင်ကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာ။
(၁) ဦးသိန်းဟန် (KYN -၀၈၆၃၆၁) -၁၃သိန်း၂သောင်း( ရရှိရန် ကျန်ရှိငွေ)
အိုးဝကျေးရွာ၊ ခရမ်းမြို့ ၊ ရန်ကုန်တိုင်း( ရရှိရန် ကျန်ရှိငွေ)
(၂) ဦးကျော်ဦး (KYN -၁၁၁၁၆၂) -၈သိန်း၇သောင်း( ရရှိရန် ကျန်ရှိငွေ)
(၃) ဦးကျော်ဦး -၄သိန်း၃သောင်း( ရရှိရန် ကျန်ရှိငွေ)
(၄) ဦးတင်ရွှေ -၆သိန်း၆သောင်း( ရရှိရန် ကျန်ရှိငွေ)
(၅) ဦးသောင်းကြည် - ၂သိန်း၃သောင်း( ရရှိရန် ကျန်ရှိငွေ)
(၆) ဦးစောငွေ -၃သိန်း( ရရှိရန် ကျန်ရှိငွေ)
ကျန်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းရန် NLD တောင်းဆို
အကျဉ်းထောင်အသီးသီးတွင် ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုသွားရန် ကျန်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ NLD က စာရင်းပြုစုလျက် ရှိသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၆၅၀ကျော်လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုလည်း NLD မှတင်ပြထားသော စာရင်းများကို အခြေခံ၍ လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
“ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ထပ်လွှတ်ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုသွားမယ်” ဟု ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမြအေးက ပြောကြားသည်။
ယင်းအကြောင်းများကြောင့် နီးစပ်ရာသိရှိသူများက ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းကြရန် NLD မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးနိုင်းနိုင်းက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မြို့နယ်ထောင်အသီးသီးမှ ကောက်ယူထားသောစရင်းများအရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၇၁ဦး ရရှိထားပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
နာမည်ကြီးနိုင်ငံရေးသမား အနည်းစုသာကျန်ရှိပြီး ပုဒ်မ ၁၇/၁ ဖြစ်ကျခံရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအမြောက် အများကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ဦးနိုင်းနိုင်းက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများ မရှိသင့်တော့ကြောင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားများက တညီတညွှတ်တည်း ပြောဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ် မက်ကော်နဲနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ကျန်ရှိနေသေးသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ရုံးခန်းဖွင့်မည်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ် ကာ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများ ကို ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းနှင့်နီးစပ်သူများ ထံမှ သိရသည်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မည် မဟုတ်သော်လည်း ယင်းနှင့်ဝေးကွာသည့် အခြေအနေတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသည့် နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းကိုလည်း လျှောက်လှမ်းမည် မဟုတ်ကြောင်း ယင်းတို့၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အစဉ်တစိုက်ထောက်ခံမှာပါ။ သူနဲ့ဝေးကွာတဲ့ လမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းဖို့ အကြောင်း မရှိပါဘူး”ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစိုးထွန်းက ဆိုသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် မည်သို့သောပုံစံဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်ကို ဆွေးနွေးနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ လူစုံတဲ့အချိန်ကစပြီး အစည်းအဝေးတွေ လုပ်နေတာ သုံးခါလောက်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တိကျတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မရသေးပါဘူး”ဟု ဦးကိုကိုကြီး (စမ်းချောင်း)က ပြောကြားသည်။
မကြာမီ အချိန်အတွင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ကာ ဆက်လက်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကို ဖော်ပြမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, January 20, 2012
ရွှေညဝါဆရာတော်ကို တလအတွင်း သာဓုကျောင်းတိုက်က ဖယ်ပေးရန် မ.ဟ.န က ယနေ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်
"၁၉-၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့)ညနေ ၁၆း၃၀ အချိန် နောက်ဆုံးထားပြီး သာဓုကျောင်းတိုက်က ထွက်ခွာပေးပါမည် ဟု ဝန်ခံကတိပြုပါသည် ။ ကျောင်းတိုက်မှ မထွက်ခွာမည် ကာလအတွင်း သာဓုကျောင်းတိုက်၌ သီတင်းသုံးနေထိုင်သမျှ ကာလပတ်လုံး ပြဿနာ တစုံတရာမဖြစ်ပွားစေရန် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ငြိမ်းချမ်းစွာ သီတင်းသုံးနေထိုင်၍ ထွက်ခွာမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုပါသည်" ဟု ရေးထားတဲ့ စာရွက်တွင် ဆရာတော် ဦးပညာသီဟက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး နေ့လည် ၂နာရီ ၄၅ မိနစ် အချိန်ခန့်တွင် ဗဟန်း ကြားတောရလမ်းမှာရှိတဲ့ တိုင်းဒေသကြီး သံဃာ့နာယကအဖွဲ့ကြီး တည်ရာဌာနမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာပြီး သာဓုကျောင်းတိုက်သို့ ရောက်ရှိနေပြီ လို့ သတင်းရရှိပါတယ် ။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, January 19, 2012
မြောင်းမြအကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်သောမစန္ဒာမင်း ( ရွှီး )ကလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်
မြောင်းမြအကျဉ်းထောင်က လွတ်မြောက်လာခဲ့သောမစန္ဒာမင်း ( ရွှီး )ကလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ နေပြည်တော်ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပါမည်.။
သံလျှင် မြို့ခံ ကြိုဆိုနေကြသော ပြည်သူများ၏ အသံ
အဆိုပြုလွှာကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်တင်သွင်းစဉ်တခဲနက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သူများအားတွေရစဉ် မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများဖြစ်ပါသည်.။
ဓာတ်ပုံ များအတွက် ကိုရောဘတ် ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
NLD ပါတီအနိုင်ရရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လှုံ့ဆော်မှုများ စတင်
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် လှုံဆော်မှုများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းများကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်ကျော်မှသာ လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် ပါတီ ကိုယ်စား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လှုံဆော်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူမက ဆိုသည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက်နေ့၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မြို့နယ်ရုံးဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် NLD ကိုယ်စားပြု၍ ယင်းမြို့နယ်မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းအား မဲပေးကြပါရန် လူံ့ ဆော်ခဲ့သည်။
“အရေးကြီးတာက မဲထည့်ဖို့ပါ။ကျွန်မတို့ ပြည်သူပြည်သားတွေဟာ ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ပိုင်ပြီဆိုပြီး မဲပေးကြပါ။ မဲပေးတဲ့ နေရာမှာလည်း ဖြူဖြူ့ကို မဲပေးကြပါ”ဟု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယင်း မိန်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
NLD ပါတီ အနေဖြင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် နေရာအပြည့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်စရိတ် မတတ်နိုင်ပါက ပါတီမှကုန်ကျခံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းပါတီမှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းကို ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် တစ်ကြိမ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက် နေ့တွင် တစ်ကြိမ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယနေ့ ရွှေညဝါဆရာတော်ကြီးအား သွားရောက် တွေ့ဆုံ ဂါရဝပြုခဲ့ကြတဲ့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ
ဓာတ်ပုံ များပေးပို့ပေးသော ဒီမိုဝေယံ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
ဒီမိုကရေစီလမ်းကလွဲလို့ တခြားရွေးစရာမရှိလို့ ဦးရွှေမန်း ပြော
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကလွဲလို့ တခြားရွေးစရာမရှိပါဘူးလို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက AFP သတင်းဌာနနဲ့ နေပြည်တော်မှာ တနင်္လာနေ့က တွေ့ဆုံရာမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာဟာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံကနေ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆီကို အသွင်ပြောင်းလဲနေကြောင်း၊ လွယ်တဲ့အလုပ် မဟုတ်ပေမယ့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကလွဲပြီး တခြားလမ်းမရှိဘူးဆိုတာ အခိုင်အမာ မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်ထားကြောင်း၊ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်လာဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ယူရမလဲဆိုတာ အတိအကျ ပြောဖို့ခက်ပေမယ့် မိမိတို့မျှော်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေဆီကို မြန်နိုင်သလောက် မြန်မြန်ရောက်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်း သူရ ဦးရွှေမန်းက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အရပ်သားအစိုးရလို့ အမည်ခံထားတဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ အပြောင်းအလဲ ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ် အနောက်နိုင်ငံတွေက အသိအမှတ်ပြု ကြိုဆိုခဲ့ကြပါ တယ်။ မြန်မာဒီမိုကရေ စီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က လည်း လတ်တလော ဖြစ်ရပ်သစ်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအပြောင်းအလဲတွေရဲ့နောက်မှာ စစ်တပ်က အခိုင်အမာရပ်တည်နေသလားဆိုတာတော့ အသေအချာ မပြောနိုင်ကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် အပေါ် ဘ၀င်မကျနိုင်သူတွေက စစ်အာဏာသိမ်းလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေကလည်း ရှိနေကြောင်း၊ အဲဒီလို ဖြစ်မလာပါစေနဲ့လို့ မိမိတို့မျှော်လင့်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းကတော့ စစ်တပ်က အာဏာပြန်သိမ်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ငြင်းပယ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မိမိအနေနဲ့မယူဆကြောင်း၊ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးရဲ့ အနေအထားကို မိမိတို့ကောင်းကောင်းသိပါကြောင်း၊ စစ်တပ်ကလည်း တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်ဖို့ ခိုင်မာတဲ့ဆန္ဒရှိပါကြောင်း ဦးရွှေမန်းက AFP သတင်းဌာနကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, January 18, 2012
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဂျင်မီ နှင့် မနီလာသိန်း မိသားစု ပထမဆုံး ပြန်ဆုံ
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ် (ရုပ်သံ)
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်း
နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေးရဲ့ အ၀င်မှာပဲ ပန်းချီကားတွေကို အဝေးကတည်းက လှမ်းမြင်ရပါတယ်။ ပန်းချီကားတွေနဲ့ အိမ်က ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ အိမ်ပဲ လို့ လမ်းညွှန်ခဲ့သူတဦးရဲ့ စကားကိုလည်း ဖျတ်ခနဲ သတိရလိုက်မိတယ်။
ဧည့်ခန်းထဲမှာလည်း ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ဖခင် ပန်းချီဆရာကြီး ဦးသက်ညွှန့်က ဧည့်သည်တွေကို ထိုင်ပြီး ဧည့်ခံနေခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
နံရံအနှံ့ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ဆိုဒ်မျိုးစုံနဲ့ပန်းချီကားတွေရယ် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို လာရောက်တွေ့ဆုံနှုတ်ဖို့လာကြတဲ့ မိတ်ဆွေသားချင်းတွေရယ်က အိမ်ခန်းထဲမှာ အပြည့်ပါပဲ။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုမြအေး၊ ကိုသက်ဦး၊ ကိုသိမ်းဆွေ၊ကိုကိုကြီးတို့အပြင် အခြားမိတ်ဆွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ သတင်းသမားအချို့ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
`တနေ့က ကိုမင်းကိုနိုင်လွှတ်တဲ့နေ့တုန်းကသတင်းထောက်တယောက်ရောက်လာပြီး ဘယ်လို ခံစားရလဲလို့မေးတယ်ဗျ။
ကျနော်က ဘယ်လိုမှ မခံစားရပါဘူးဗျာ လို့ ဖြေတော့ကျနော့်မျက်နှာကို သေချာ စိုက်ကြည့်နေလိုက်တာဗျ။ တကယ်ပါ ဖမ်းသွားတဲ့နေ့တုန်းကလည်း အဲလိုပဲ မေးခံရပါတယ်။ တကယ်ကို မခံစားရတာပါ။ သားက သူ့အလုပ်သူုလုပ်နေတာပဲ၊ ကျနော်ကလည်း ပန်းချီဆွဲတော့ ပန်းချီဆွဲတဲ့အလုပ် ပတ္တလားတီးတဲ့ အလုပ် ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပါတယ်`လို့ ဆရာကြီးက ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ ပြောပါတယ်။
ငွေရောင်ဆံပင်နဲ့ အသားဖြူဖြူ မျက်နှာကျဥပဓိရုပ်ကောင်းလှတဲ့ ပန်းချီဆရာကြီးက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရိုးရိုးသားသား ပြောနေတာကို ကျမ လေးစားနှစ်ခြိုက်စွာ ငေးကြည့်ရင်း နားထောင်နေခဲ့တယ်။ သားဖြစ်သူကို လေးစားဂုဏ်ယူတဲ့ ဖခင်တယောက်ရဲ့ စကားတွေဟာ ကျမတို့အတွက်တော့နားဝင်ချိုလှပါတယ်။
`သူက မနေ့ကလည်း ခရီးပန်းပြီး အိပ်ရာဝင်တာနောက်ကျတော့ သူအိပ်ရာထ နောက်ကျလိမ့်မယ် ထင်ပြီး သမီးတို့ကို အဘက မနက် ၉နာရီလောက်လို့ ပြောလိုက်တာ။ သူက ဒီမနက် အစောကြီး နိုးတယ်ဗျာ၊ မနက် ၆နာရီကတည်းက နိုးနေတယ်လေ`လို့ ပန်းချီဆရာကြီးက သားဖြစ်သူရဲ့ လုံ့လကို ပြောပြပါတယ်။
တအိမ်လုံးနံရံတွေမှာ အပြည့်ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေအပြင် စင်တွေမှာ အရွယ်စုံတင်ထားတဲ့ ပန်းချီကားတွေကလည်း အများကြီးပါ၊ ကျမတွေ့ဖူးတဲ့ ပန်းချီဆရာကြီးတွေထဲမှာတော့ ပန်းချီကားအများဆုံး ပန်းချီဆရာကြီးပါပဲ။ ပြီးတော့ ရှု့ခင်းပုံတွေကို အများကြီး ဆွဲထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပန်းချီဆရာကြီးနဲ့စကားပြောခွင့်ရနေတုန်းမှာပဲ အစိမ်းရင့်ပေါ်မှာ ကွက်စိတ်အစိမ်းကွက် စိတ်စင်းလေးတွေပါတဲ့ရှပ်စ်အကျီာင်္လက်တိုနဲ့ကချင်ပုဆိုးဝတ်ထားပြီးအပေါ်ဝတ် ဝေ့စကုတ်အဖြူရောင်ထပ်ဝတ်
ထားတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်က ဧည့်သည်များရှိရာ ဧည့်ခန်းထဲကို ရောက်လာပါတယ်။
ဧည့်သည်တွေနဲ့တယောက်ချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုနေတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ကျမတို့လည်းငေးကြည့်နေမိတယ်။ သူ့သတင်းတွေ၊ သှူု့ဓါတ်ပုံတွေကို မြင်ဖူးတာကလွဲလို့ ခုလို အပြင်မှာ တခါမှလည်း တွေ့ဖူးတာ မေးခွန်းမေးဖူးခဲ့တာမရှိပါဘူး။
သို့သော်လည်း သူ့အကြောင်းရေးထားတဲ့စာတော်တော်များများကို ကျမ ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုလည်း သူ့ကိုမြင်ရတာ ကျမနှင့်စိမ်းနေသလို မခံစားရပဲ ရင်းနှီးသလို ရှိနေခဲ့တယ်။
သူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ရွင်လန်းစွာပြုံးရင်း စကားပြောနေတဲ့ အမူအရာက အမြဲတွေ့နေကြ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံနေသလိုမျိုးပဲ အေးအေးဆေးဆေးနှင့်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိလှပါတယ်။ သူကို ကြည့်ရင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကရဲ့ လောကဓံကို ဖြတ်သန်းရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ သူတယောက်ရဲ့ လေးနက်တည်ငြိမ်မှုနဲ သိမ်မွေ့မှုတို့ကို တွဲယှက်ပြီး မြင်တွေ့နေရတယ်လို့ လည်း ထင်မှတ်မိပါတယ်။
တိုင်းပြည်အတွက် သူ့ဘ၀တခုလုံး ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့၊ပေးဆပ်နေတဲ့ သူ့လုပ်ရပ်ကို ပြည်သူတွေ ချစ်ကြသလို၊ သူ့ရဲ့ ရိုးသားမှု၊ တည်ငြိမ်လေးနက်မှု၊ သိမ်မွေ့အေးဆေးမှုကလည်း ပြည်သူတွေကို ချစ်စေခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ကျမသူ့ကို စမေးခွန်းမေးခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျမစပြီးမေးလိုက်မိတဲ့ မေးခွန်းက ကျမစိတ်အ၀င်စားဆုံးဖြစ်တဲ့ မေးခွန်းပါ။
တယ်၊ အဲဒီဝတ္ထုကို တညတည်းနဲ့အပြီးဖတ်လိုက်တာ၊ ဖတ်ပြီးတော့လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသေးတယ်`လို့ ပြောလိုက်မိပါတယ်။
`အဲဒီဝတ္ထုက ဒီလိုဗျာ၊ကျနော်အသက် ၂၀လောက်တုန်းက ရေးထားတာ တော်တော်ကြာပြီ၊ ငယ်လက်ရာကြီး ဖြစ်နေတယ်၊တော်တော်ကလေးဆန်ပါတယ်ဗျာ`လို့ ပြောတော့ ကျမက `ဒါပေမဲ့ ၀တ္ထုကောင်းပါ ကောင်းပါတယ်`လို့ ဆက်ပြောတော့ သူက အသံထွက်ပြီး ဟားဟားနဲ့ ရိုးသားစွာ ရယ်နေသေးတယ်။
တကယ်တော့ `နောက်ကြည့်မှန် `] ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်ရေးခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုကို ကျမက ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်လောက်တုန်းက အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ E.book အနေနဲ့ ဖတ်ခဲ့ရတာပါ။ ည ၉နာရီလောက်ကနေစဖတ်ခဲ့တာ၊ ဖတ်လို့ကောင်းလွန်းလို့ ဆက်ဖတ်ချင်တာနဲ့ပဲ ဆက်ဖတ်ခဲ့တာ ဖတ်ရင်း မိုးလင်းသွားခဲ့တဲ့ ၀တ္တုတပုဒ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျမတို့ သူ့ဝတ္ထုဖတ်နေချိန် သူက ထောင်ထဲမှာလို့လည်း တွေးမိပြီး စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့စာလို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
``၀တ္ထု၊ ကဗျာ ရေးဖို့ကော အစီစဉ်ရှိလားအကို`လို့ ကျမ ဆက်မေးမိပါတယ်။
`၀ါသနာအလျောက်လုပ်ထားတာပါ၊ ကျနော်နောက်ထပ် ရေးပြီးသားတွေကို ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်တအိမ်မှာ ၀င်ဖမ်းတုန်းက သူတို့က လူကိုမရတဲ့အခါမှာ အဲဒီစာမူတွေအကုန်ယူသွားရောဗျာ၊ ကျနော် ပြန်တောင်းဖို့ရှိတယ်ရအောင်ပြန်တောင်းဖို့တော့ ကြိုးစားကြည့်ဦးမယ်၊ အများကြီး ရေးထားတာရှိတယ်။ အနုပညာသက်သက်တွေပါ`လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်က ဖြေပါတယ်။
အဲဒီမေးခွန်းအပြီးမှာတော့ကိုမင်းကိုနိုင်သရက်ထောင်ကနေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သူ့နဲ့ပြည်သူလူထု တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ကြတဲ့ အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇန်န၀ါ၇ီလ ၁၂ရက်နေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ သရက်ထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန် ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်နေ့မှာ သတင်းထောက်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုပေါင်းများစွာဟာ မင်းကိုနိုင်ကို သွားရောက်စောင့်ကြည့်ကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါ။ ဒါ့အပြင် ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ရန်ကုန်အပြန်ခရီးစဉ်တလျှောက်က မြို့တွေမှာ ဒေသခံ ပြည်သူတွေက ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသလို လူထုအတွက် စကားတွေလည်း ပြောဆိုပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုမင်းကိုနိုင်က ခုလို ပြောပါတယ်။
`ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရ ပြောရရင် ကျနော့်အနေနဲ့တော့ နှစ် ၂၀နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေနဲ့ ပြန်ပြီးထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာပါ၊ ဟုတ်ပါတယ် လူတွေရဲ့ နိုးကြားလာမှု၊ ထပ်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေ ခိုင်မာလာမှုနဲ့စိတ်အားပါမှုကတော့ နှစ် ၂၀ ကျော်မှ ပြန်တွေ့ရတာပါ`လို့ကိုမင်းကိုနိုင်က ဖြေပါတယ်။
၈၈ ခုနှစ်အလွန်ကာလနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် ကျော်အချိန်၊ ၅နှစ်ကျော်ခန့် နှစ်တွေဝန်းကျင်တုန်းကတော့ ပြည်သူလူထုဟာ ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ကြိုဆိုဖို့မပြောနဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ အကြောင်းကိုတောင် ခဟဟ မပြောရဲခဲ့တဲ့ အနေအထားတခုကို မြန်မာပြည်သူတွေ ကျရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲပြီးကာလတွေမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုသာမက သူတို့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေ၊အားပေးခဲ့တဲ့သူတွေကိုပါဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြရတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေဟာ နိုင်ငံ
ရေးဆိုတာ ကြောက်စရာတခုလို အသိအမြင်တခုကို နှစ်၂၀ကျော်ကြာအောင်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲအပြီး အရပ်သား အစိုးရတက်လာ ချိန်ကစပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်ပေးခဲ့ပြီးပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ပြည်သူလူထု ရဲ့ နိုးကြားမှုဟာလည်း ပြန်လည်စတင်လာခဲ့ပါတယ်။ ခုလို ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရဲ့ အထင်ကရခေါင်းဆောင်တွေကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်ပေးလိုက်ပြီး ဒီမိုကရေစီအစိုးရအသွင် ကူးပြောင်းနေတဲ့အစိုးရကလည်း သူ့ရဲ့စတင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ပြသနေခဲ့ပြီလို့ ကျမကတော့မြင်မိပါတယ်။
`အနှစ် ၂၀ ကျော်လောက်ပေးဆပ်ထားရတာတွေဟာ အလဟဿ မဖြစ်ပါဘူးလေ။ မပြောင်းလို့မရပါဘူး။ အဲဒါကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေဘက်က သဘောပေါက်ကြပြီလို့ ကျနော်ထင်ပါ၊ သဘောပေါက်လို့လည်း ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်`လို့ကိုမင်းကိုနိုင်က အပြောင်းအလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနေချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ အချို့ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲစေတဲ့ အကြောင်းအရာအချို့ကိုလည်းတွေ့မြင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေမှာလည်း အဓိကဦးစားပေးပြီး
မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမဲ့ ကိစ္စရပ်တွေ ဖြစ်လာကြောင်း ကိုမင်းကိုနိုင်က သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။
`အဟောင်းကိုဆင်ပြီး ဖက်တွယ်ချင်တဲ့ အင်အားစုတွေရှိနေသလိုရှိနေလို့ကတော့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေးက လိုသလောက်ခရီးမရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာ`လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်က သုံးသပ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို လက်ရှိ မြန်မာ့မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့အမြင်ကိုလည်း မေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ပြည်တွင်းမှာ ရေးသားထုတ်ဝေနေကြတဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ အများဆုံးတွေ့မြင်နေရတာက ဘက်မျှမှုမရှိတဲ့အနေအထားတွေကို တွေ့မြင်နေရကြောင်း မီဒီယာအနေနဲ့ဘက် မျှအောင် ရေးသား ထုတ်ဝေဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုသူက ပြောဆိုပါတယ်။
`ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်ကြိုက်၊ မကြိုက်ကြိုက် ဘက်နှစ်ဖက်မျှအောင် ရေးရမယ်။ ဘက်နှစ်ဖက်လုံးကိုတင်ပြမှသာ စာဖတ်သူက ရွေးချယ်လို့ရမှာပါ။ တဖက်ကိုပဲ ဖော်ပြခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာ ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး လုပ်နေကြတဲ့ မီဒီယာတွေဟာ ဒီကနေ့ နဲနဲလေး လူးသာလွန့်သာရှိလာပြီ။ ဒါပေမယ့် အရင် အတွေးအခေါ်၊ အရင်စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ အနှုးအညွှန့်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ရဲရဲတင်းတင်း ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ဖော်ပြပေးကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ အပေါ် မကောင်းမြင်တဲ့ ကိစ္စတွေရှိရင်လည်း ဖော်ပြကြပါ။ အရေးကြီးတဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးက အတွေးတွေ၊ အမြင်တွေကို ထည့်ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။ အလုပ်လို့ရအောင်လည်း မီဒီယာတွေကို ကြိုးစားစေချင်တယ်။ ကျန်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးဖို့သင့်ပါပြီ။ ပြည်သူတွေဘ၀တွေ အသက်တွေပေးပြီးတော့ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးတွေပါ။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ ခေါ်တဲ့ မီဒီယာသမားတွေ အားစိုက်ခွန်စိုက်လုပ်ကြပါ။ တကယ်ဘက်မျှတယ်ဆိုရင် ပြည်သူက ထမင်းမစားပဲ အဲ့ဒီ ဂျာနယ်ကို ၀ယ်ဖတ်ကြမှာပါ။ သေချာပါတယ်၊ တခြားဟာတွေကိုလွှတ်ပြီးအဲဒီသတင်းဌာနကိုကြည့်ကြမှာပါ။ ပြည်သူတွေကိုစိတ်ချပါ။မီဒီယာတွေသာတာဝန်
ကျေဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲ ပြောချင်ပါတယ်`တဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြော
ပြည်သူတွေသူ့နောက်ကနေ တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး ချစ်ရ၊အားကိုးရလောက်တဲ့ သူတယောက်ကို ကျမ အင်တာဗျူးလုပ်ရင်း ငေးကြည့်နေမိပါတယ်။ သူဟာ မီဒီယာဟာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါတယ်လို့ နားလည်ထားတဲ့သူ၊ သတင်းသမားတွေကို မျှတစေချင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားပါ။
အသားညိုညို၊မျက်နှာပြည့်ပြည့်နဲ့မာန်မရှိသောအကြည့်နဲ့၊ အေးချမ်းသိမ်မွေ့ပေမဲ့ ပြတ်သားတဲ့ ပြောအဆိုတို့
ကို တွေ့ရပါတယ်။ အနုပညာသမားတယောက်ရဲ့ သိမ်မွေ့မှုမျိုးနဲ့ပြတ်သားဖြောက့်မတ်မှုကိုလည်း သူ့ရဲ့အဖြေစကားတွေကနေ ကျမကြားနေရပါတယ်။
ပြီးတော့ သူဟာ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလှ တဲ့ နိုင်ငံရေးသမား တဦးဖြစ်ပေ မဲ့ ပြည်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေပြန်တယ်။ သူ့ရဲ့အနေအထိုင် အပြောအဆိုဟာ သိပ်ကို ရိုးရှင်းလှပါတယ်။ သာမန်လူတယောက် လိုပဲ ပြောဆိုပြုမူနေ ထိုင်နေတာကို တွေ့ရတော့ ကျမသူ့ကို ပိုပြီး လေးစားမိပါတယ်။
`အရပ်သားအစိုးရ တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံတော်သမတ ဦးသိန်းစိန်က အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြည်ပရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ပြန်လာနိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့တာရှိ
ပါတယ်။ အဲဒီပေါ်မှာကို အကိုဘယ်လိုမြင်မိပါပြီလဲ၊ တကယ်ပဲ စိတ်ချလက်ချပြန်လာလို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်ပြီလို့ မြင်ပါသလားရှင့်လို့ကျမ မေးလိုက်မိပါတယ်။
“ပြည်တွင်မှာတောင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားက တကယ်တမ်းတော့ မကုန်ုသေးဘူးလေ ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာက ဒီလိုဗျ ဒါမျိုးက သမ္မတ တစ်ယောက်ရဲ့အမိန့်တရပ်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့ ကျကျနနထုတ်ပြန် ပြဋ္ဌာန်းလေးဖြစ်စေချင်တယ်။ ခရီးသွား ဟန်လွဲ စကားစပ်မိလို့ပြောလိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ တယ်ပြီးတော့ တရားမ၀င်ဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရှင်းလင်းတဲ့ဖော်ပြမူလဲမတွေရဘူး။ နောက်ပြီးတွေ ကိုသဘောနဲ့ကို တစ်ဦချင်းကို ဒီလူတော့ဝင်လိုရတယ် ဒီလူတော့ဝင်လို မရဘူးလို့ ကျနော်တော့ ခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ လုပ်စေချင်တယ်။ အားလုံး လာရမယ်ဆိုရင် လာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုး ဒီမှာ ရနေပြီဆိုရင်တောင်မှ သပ်သပ်မှတ်မှတ်နဲ့အမိန့်ထုတ်ဲပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေကိုကြိုဆိုတယ်ဆိုတာ မျိုးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လုပ်စေချင်တယ် အဲဒါမှ သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း ရှိတယ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးလည်း ရှိမှာပါ`လို့ကိုမင်းကိုနိုင်က ဖြေဆိုပါတယ်။
သူ့ကို မေးဖို့ မေးခွန်းတွေကို သူလွတ်တဲ့နေ့ကနေစပြီး ထုတ်လာခဲ့တာ ကျမမှာ မေးခွန်း ၄၀လောက်ထိ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုတွေ့ဆုံဖို့ စောင့်နေကြတဲ့ သူတွေကလည်း အယောက် ၂၀ထက်မနည်းရှိနေပါတယ်။ ခရီးပန်းလာတဲ့ သူ့ကိုလည်း အားနာမိတာရယ်၊ စောင့်နေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်း အားနာစိတ်ရယ်ကြောင့် မေးခွန်းတွေကို အစသတ်လိုက်ရပါတယ်။
တကယ်လို့များ နောက်ထပ်တကြိ်မ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့မေးခွန်းတွေကို ကျမ ဆက်မေးဖြစ်ဦးမှာပါ။
ပြန်ကာနီးမှာတော့ကျမသူ့ကို အကိုဝတ္တုတွေ၊ ကဗျာတွေ ရေးတာကို ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်လို့နှုတ်ဆက်ရင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
တကယ်တော့သူဟာလည်း အနုပညာအားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတယောက်လို့ ကျမကတော့ မြင်မိပါတယ်။ သူရဲ့ နိုင်ငံရေး အနုပညာနဲ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း သူ့အပေါ် ယုံကြည်မိပါနေတယ် ရှင်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, January 17, 2012
ပေးပို့ပေးသော ဒီမိုဝေယံ အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ပြုသူက အသစ် ခံရသူက အဟောင်း...
လောကဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းလို့ သံဃာတော်တွေကို ထောင်ချတဲ့အပြစ်ဒဏ်ထက် သိက္ခာမချ သိက္ခာမကျသေးတဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ သင်္ကန်းဝတ်တွေကို အတင်းဆွဲခွာချွတ်တဲ့ အပြစ်ဒဏ်က ပိုပြီး အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာကို ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတွေ သိစေချင်ပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တွေ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ မစိုးရိမ်ဆရာတော် အရှင်ဝီရသူက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မစိုးရိမ်ဆရာတော် အရှင်ဝီရသူဟာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကျောက်ဆည် ကုလား-ဗမာ အရေးအခင်းအတွင်း အဓမ္မ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ပုဒ်မ ၁၇/၂၀၊ ၅ည၊ ၂၉၅/က၊ ၈ (၁) တို့နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ် ချမှတ်ခံရကာ ပထမ မန္တလေးထောင်၊ အခုနောက်ဆုံး မြစ်ကြီးနားထောင်တွေမှာ အကျဉ်းကျခံနေခဲ့ရပါတယ်။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရှိချိန်မှာ ထောင်တွင်း ၈ နှစ်နဲ့ ၃ လ နေခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Monday, January 16, 2012
တို့ ပါတီ ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ထုတ်လိုက်တဲ့ ဒီလှိုင်း ထွက်ပါပြီး
အာဏာရှိစဉ်က ဒေါ်စုကြည် ဆိုပြီးခေါ်ဝေါ် ဒုက္ခမျိုးစုံပေး ၊အာဏာပြောက်တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါ်ဝေါ်ပြီး ထောက်ခံအားပေး တဲ့ဦးခင်ညွှန်
နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွှန့်သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့၏ လှုပ်ဆောင်မှုများကိုထောက်ခံကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၁၃ရက်နေ့တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့၏ လက်ရှိကြိုးပန်းဆောင်ရွက်မှုများသည် တိုင်ပြည်အနာဂတ်အတွက် ကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်ဟု ရှုမြင်ပါကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်၊ ပြီးရင် လွတ်တော်ထဲရောက်မယ်၊ သိပ်ကောင်းတာပေါ့။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ပြောရဲဆိုရဲ ပြောတတ်ဆိုတတ်သူကို နောင်အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်အကျိုးရှိမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ပါတော့ တိုင်းပြည်အတွက်သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ထောက်ခံ တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပုံကို ထောက်ခံပါတယ်” ဟု ဦးခင်ညွှန့်က ဆိုသည်။
ဦးခင်ညွှန့်သည် ယခုကဲ့သို့ လွတ်မြောက်လာသော်လည်း သူ၏တပည့်များမှ တချို့သော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် အကျဉ်းထောင်များထဲတွင် ဆက်လက်ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဦးခင်ညွှန့်က “လက်ရှိအစိုးရက တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါကျတော့ လွတ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ဦးခင်ညွှန့်နှင့် သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တချို့ လွတ်မြောက်လာခဲ့သော်လည်း ဦးခင်ညွှန့်ထောင်ချခဲ့သော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ပြန်လည် မလွတ် မြောက်လာသေးကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုမြအေးက ပြောကြားသည်။
“၂၀၀၄ကတည်းက ဦးခင်ညွှန့်အဖွဲ့ကပျက်သွားပြီပဲ သူဖမ်းခဲ့တဲ့လူအားလုံးကိုတော့ ပြန်လွှတ်ပေးသင့်တာပေါ့” ဟု ကိုမြအေးက ပြောကြားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ကျန်ရှိနေခဲ့ရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်စိစစ်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုပြုံးချိုက ပြောကြားသည်။
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားကလည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ယခုအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အပေါ် ကြိုဆိုကြောင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း ပေါ်သို့ လျှောက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြီးမားသောဖြေလှမ်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
မြန်မာပြည်သူလူထု၏ မျှော်မှန်းချက်များ ပြည့်ဝရန်အတွက် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားကြရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆက်လက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမှုများကြောင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တစ်ထောင်ကျော် လွတ် မြောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် မှကောက်ယူထားသော စစ်တမ်းများအရ သိရသည်။
သတင်း..... yangon chronicle
ကိုမင်းကိုနိုင် ရန်ကုန်မြို့ ကိုရောက်ရောက်ချင်းပဲ မြောက်ဥက္ကလာမြို့ နယ်ကနေ ကြိုဆိုနေတဲ့ လူထုကြီးကို မိန့် ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, January 15, 2012
ဘူးသီးတောင် ထောင်မှ လွတ်လာသူ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားကိုဋ္ဌေးကြွယ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ရက်နေ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် ဘူးသီးတောင်ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသော ကိုဋ္ဌေးကြွယ်ကို ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်နေ့၊ ညနေ ၅နာရီဝန်းကျင်အချိန်ခန့်တွင် သူ၏ နေအိမ်၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
မေး။ ။ ထောင်ကျခဲ့ရတာနဲ့ ထောင်ထဲမှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အနေအထားလေး ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။ ။ ထောင်ထဲကကြုံခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေကတော့ အများကြီးပေါ့ (၂၀၀၇) ရွှေဝါရောင်သံဃာ့အရေးအခင်း လှုံ့ဆော်ခဲ့ မှု့တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့နဲ့ပေါ့၊ (၆၅)နှစ်နဲ့ (၆)လ ကျပါတယ်။ ပုဒ်မတွေကတော့ တပ်ချင်တာတွေတပ်နေတာပါပဲ၊(၆)လ ဆိုတာကတရားရုံးမှာ သူတို့ကို ပြန်လှန် မေးခွန်းထုတ်မှု့နဲ့ပါ၊ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် (၉)ယောက်ဟာ တရားရုံးကို မထေမဲ့မြင်မှု့ ဆိုပြီးတော့ (၆)လထပ်တိုးပါတယ်။
မေး။ ။ ခုလွှတ်ပေးတဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အခု လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံးနီးပါး ပါတယ်။ (၈၈) မျိုးဆက်ကျောင်းသား အပါအ၀င် အဓိက ခေါင်းဆောင် တော်တော်များများပါလာ ပါတယ်။ ခုလိုလွှတ်ပေးခြင်း အပေါ် ၀မ်းသာတယ် ဆိုတာထက် ဒီလွှတ်ပေးမှု့ရဲ့ရလဒ်ကနေ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအတွက် ပိုပြီးတော့ ၀မ်းသာပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ ကြားထဲမှာရော ကောင်းတဲ့ ရလာဒ်ပါ။
မေး။ ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အများစု လွတ်မြောက်လာတဲ့ အတွက် ဖြစ်လာနိုင်သော နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ။
ဖြေ။ ။ စပါပြီ၊ ပြောင်းလဲမှု့တွေ စပြီလို့တော့ ပြောလို့ရတယ်။
မေး။ ။ သမ္မတကြီးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံဆွေနွေးတဲ့ အပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
တွေ့ဆုံဆွေနွေး၊ အဖြေရှာခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ။ အဲဒီကနေပြီးတော့ ခုလို ရလဒ်တွေ ဆက်တိုက်ထွက်လာတယ်။ ကွာခြားတာက အုပ်ချုပ်ပုံ စနစ်ပြောင်းပြီဆိုတဲ့ဟာကို သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဟိုတုန်းက စစ်အစိုးရပေါ့။ စစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်၊ အခု ပြည်သူကိုတာဝန်ခံရတဲ့ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ အနှစ်သာရခြင်းလည်း မတူပါဘူး။ အသွင်သဏ္ဍာန်ခြင်းလည်းမတူပါဘူး။
မေး။ ။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘယ်အပိုင်းတွေကို အရင်ဆုံး ပြုပြင်သင့်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ တခွန်းတည်းပြောပြရရင်တော့ တရားမျှတရေးပေါ့။ ဒီကြားထဲမှာ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှု့ရေးတွေမှာ တရားမျှတမှု မရှိဘူး ဆိုရင် ဒီလိုနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီ ပေးလို့ကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ပေးပါပေးပါ ဆိုပြီးတောင်းနေရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေ လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်။နိုင်ငံသား တစ်ယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးဘာလဲဆိုတာ သိနေရမယ်။ဒီအခွင့်အရေးကို ရယူပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းလည်း ရှိရပါ့မယ်။ ကိုယ်ကအခွင့်အရေးတော့လိုချင်တယ်။ တာဝန်ယူပြီး မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်း မဖြစ်ပါဘူး။ တာဝန်ခံပြီး၊ တာဝန်ယူပြီး တွဲသွားရမယ်။ အဓိကအားဖြင့် တရားမျှတရေး ရှိမှ ဖြစ်မှာပါ။
မေး။ ။ လက်ရှိ ပြည်သူတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး ရေချိန်ကို ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ မြန်မာပြည်သူတွေက နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင်တော့ အရမ်းနိုးကြားပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံ အားလုံး မှာ မြန်မာ ပြည်သူတွေလောက် မတရားမှု့ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ အစိုးရတွေကို စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံ တနိုင်ငံမှ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်လို့ ရခြင်ရမယ်၊ ဒါပေမယ့်လို့ ဒီပြည်သူတွေရင်ထဲက အမှန်တရားကို ချစ်တဲ့စိတ်၊ လွတ်လပ်ချင်တဲ့စိတ်၊ လွတ်လပ်မှု့ကို မြတ်နိုးတဲ့စိတ် ဒါတွေကိုတော့ ဖိနှိပ်လို့ မရပါဘူး။ ဒါကို သူရယ် ကိုယ်ရယ်လို့ စဉ်းစားမနေပဲနဲ့ အစိုးရကလည်း အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရော အခု နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သတ်နေတဲ့ အင်အားစုအားလုံး အသီးသီးဟာ တသားတည်း ခံစားပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကို အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ကျန်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့ ရှိနေပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံရေး အရအကျဉ်းကျခံခြင်းဆိုတာက နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်၊ နိုင်ငံရေးပြစ်မှု့ ဆိုပြီးတော့ အကျဉ်းကျခံခြင်းဟာ တိုင်းပြည်မှာ မမျှတတဲ့ စနစ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့ အခါမျိုးမှာ စနစ်ရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ အခု ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့် တချိန်တုန်းက မဟုတ်တဲ့ စနစ်ကို သူတို့ အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့စနစ်က အသားထဲ အသက်လည်း ၀င်သွားတဲ့ အခါမှာ အဲ့ဒီ စနစ်ရဲ့ သားကောင်အဖြစ် ပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါဟာ အုပ်ချုပ်ခံရသူတွေပဲ သက်ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေ အပေါ်မှာလည်း သက်ရောက်ပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုး အခြေအနေတွေပေါ့လေ၊ ဟိုတုန်းကတော့ အာဏာပိုင်စနစ်၊ အဲ့ဒီ အခြေနေတွေကနေခု စနစ်တစ်ခုလုံးပြောင်းနေပြီ ပြည်သူကို တာဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး ပုံစံ ပြောင်းနေပြီ၊ ပြောင်းနေပြီ ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးကြောင့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ သူတွေ မရှိသင့်တော့ဘူး။ စနစ်သစ်ကို လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း တကယ့် အသစ်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်။ အဟောင်းကို ပုံစံပြင်တာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ခုထောင်ထဲမှာ ကျန်နေသေးတယ်။ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ အစိုးရကို ပြောချင်တာက လွှတ်ပေးလိုက်ပါတော့။ မျှတတဲ့နိုင်ငံကို အားလုံး ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့တည်ဆောက်ကြမယ် လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ခုလက်ရှိ မီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ မီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ပြောရမယ်ဆိုရင် တကယ်ဖွံ့ဖြိုးသွားတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ထူထောင်ရေးတွေကို ပြန် ကြည့်ကြည့်၊ဘယ်နိုင်ငံမှာ မဆို မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာရှိတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှု့နဲ့ မီဒီယာဆက်စပ်မှု့ဟာ တသားတည်းလို့တောင် ပြောလို့ရတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ စစ်ရောကြေးတွေ တပုံတပင်နဲ့ တိုင်းပြည်ကို ပြာပုံထဲကနေ ပြန်ပြီးတော့ ရုန်းရတယ်။ အဲ့ဒီ နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ တခုတည်းသော အနုမြူးဗုံးချခြင်းခံရတဲ့ နိုင်ငံ၊ တိုင်းပြည်က စစ်ရောကြေးတွေနဲ့ ပိနေတယ်။ နေ့တိုင်း ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်နေတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီ ရာကျော်ရှိနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အာဏာရထားတဲ့ (LPP) ပါတီကလည်းရှိနေတယ်။ မီဒီယာတွေဟာ အစိုးရရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဖော်ပြတယ်၊ စစ်ရောကြေးဘယ်လောက်ရှိနေပြီ၊ ဘယ်လောက်ကြပ်တည်းမှု့ရှိနေပြီ၊ ဒါတွေတိုင်းပြည်ကို သိအောင်ပြောသလို၊ လူထုရဲ့အခက်အခဲတွေ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီ၊ ငတ်ပြတ်နေတယ်၊ ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေ ကိုလည်း အစိုးရသိအောင် ပြန်ပြောတယ်၊ မတရားမှု့တွေကိုလည်း ဒီအစိုးရသိမှဖြစ်မယ်၊ မီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ လူထုရဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်အောင် မောင်းထိုးပေးရတဲ့ ကိစ္စပါ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာ ခုထက်ပိုပြီးတော့ လွတ်လပ်ဖို့လိုပါတယ်၊ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကြောင့် တိုင်းပြည်ဟာကောင်းဖို့ပဲရှိတယ်၊ ဆိုးဖို့မရှိဘူးဆိုတာ ခုအုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ သူတွေ ပိုပြီးတော့ သိဖို့ သဘောပေါက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ပြည်သူတွေကို ပြောချင်တဲ့ စကားလက်ဆောင်လေး ရှိရင်လည်းပြောပေးပါဦး။
ဖြေ။ ။ တိုင်းပြည်က အပြောင်းအလဲတွေကို တကယ်သွားနေပါပြီ။ လူထုကလည်း ၀ိုင်းဝန်းပြီးတော့ ပူပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
“ဟုတ်ကဲ့ ကိုဌေးကြွယ်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြစ်မခက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”
ဘားအံထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသူ နေဘုန်းလတ်နှင့် အင်တာဗျူး
အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာသော အိုင်တီ ဘလော့ကာ နေဘုန်းလတ်သည် ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ရက်နေ့တွင် ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှ အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များအား လာရောက်တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်စဉ် မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်၊
မေး။ ။အကိုထောင်ကလွတ်တဲ့အခါမှာရော အကို့တို့ကို ပုဒ်မ ၄၀၁ နဲ့ပတ်သက်ပြီး ၀န်ခံကတိ ထိုးခိုင်းတာရှိပါသလား။
ဖြေ။ ။ကျွန်တော်တို့ကို ၄၀၁ အပိုဒ်တစ်ကို ဖတ်ပြတယ် ။ အဲ့ဒီ ၄၀၁ အပိုဒ်တစ်အရ နောက်ထပ်အဖမ်းခံရတဲ့အခါ အကြွေးဆပ်ရမယ်ဆိုတာကို သမ္မတအမိန့်ဆိုပြီးဖတ်ပြတယ် လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ကိစ္စကတော့ ကသိကအောက်ဖြစ်စရာပဲ ကျန်တာကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
မေး။ ။လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်လာတဲ့အပေါ်မှာရော အကိုဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား တော်တော်များများ လွတ်လာလို့ပျော်ပါတယ်။
မေး။ ။ဘယ်နှစ်ခုနှစ် ထိန်းသိမ်းခံရတာပါလဲ။ဘယ်နှစ်နှစ်လောက် ကျခဲ့တာပါလဲ။
ဖြေ။ ။၂၀၀၈ ဇန်န၀ါရီ ၂၉ မှာ စပြီး ထိန်းသိမ်းခံရတယ် ကျွန်တော် အနှစ် နှစ်ဆယ် နဲ့ ခြောက်လ ကျတယ်။အယူခံ ၀င်တာ ၈ နှစ်နဲ့ ၆လ ပြုတ်သွားတော့ ၁၂ နှစ်ကျန်တယ်။ ပုဒ်မက ၃၀၂ (ခ)/ ၃၆ ၃၃(က) ၊ ၅၀၅(ခ)နဲ့ကျွန်တော်ကျခဲ့တာပါ။
မေး။ ။ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာလုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။နိုင်ငံရေးတာ့ ဆက်လုပ်မယ် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး အိုင်တီသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော် ဘလော့ဆက်ရေးမယ်။ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်လဲ ဖွင့်ထားတယ် ဖေ့ဘုတ်မှာလဲ တင်မယ် ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်တော် Press မီဒီယာတွေမှာ ကျွန်တော် စာရေးမှာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ စာပေရေးသားခြင်းနဲ့ professional လုပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
မေး။ ။ထောင်ထဲမှာ နေရတဲ့ အခြေအနေလေးကို ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။ ။ထောင်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အဆောင်ကလူတွေနဲ့ တိုက်ကလူတွေနဲ့တော့ မတူဘူးပေါ့ ကျွန်တော်တို့တိုက်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပဲ ရှိတဲ့အတွက် အဆောင်ကလူတွေကို ဆက်ဆံပုံက နည်းနည်း တစ်မျိုးပေါ့။
မေး။ ။ထောင်ထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ လူတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။အခုဟာက နာမည်ကြီးတွေ တော်တော်များများ လွတ်ပါတယ်။ကျန်ခဲ့လူတွေက အဓိက ဖောက်ခွဲရေးမှု ကပ်တဲ့လူတွေ၊ နောက်တနည်းနည်း မထင်မရှားတွေ ကျန်သေးတယ်။ဒီကိစ္စကလဲ ဘာပဲပြောပြော မကုန်သေးဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဆက်ပြီးတောင်းဆိုနေရမှာပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကျွန်တော်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရယ် မဟုတ်ပါဘူး ကျန်တဲ့အကျဉ်းသားတွေ အကုန်လုံး လွတ်စေချင်ပါတယ်။အခြားအကျဉ်းသားတွေကလဲ အစိုးရသစ် အပြောင်းအလဲမှာ အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို မျှော်လင့်နေကြတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ထောင်ခါတဲ့အထိကို ကျွန်တော်က ဖြစ်စေချင်တာပါ။
မေး။ ။ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံပီပီသသဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ အစ်ကိုအနေနဲ့ မြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။မဏ္ဍိုင်တွေရှိတယ်ဗျာ။ တရားရေးမဏ္ဍိုင် ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင် ၊ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင် အဲ့မဏ္ဍိုင်သုံးခုက အချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သေချာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ balance ဖြစ်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ အဲ့ဟာကို အားကောင်းကောင်းနဲ့ ဖြစ်ထွန်းဖို့က အရေးကြီးဆုံးပဲ။ အားကောင်းကောင်းနဲ့ ဖြစ်ထွန်းဖို့ ၀ိုင်းကြိုးစားရမယ်။ လွှတ်တော်ထဲက ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲ လုပ်ကြရမဲ့ အလုပ်တော့ မဟုတ်ဘူး အများကြီးရှိတယ်။ လွှတ်တော်တွေပါမယ် ၊ အစိုးရအဖွဲ့တွေပါမယ် ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေပါမယ် ၊ အဓိကအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေပါမယ်။ အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ မဏ္ဍိုင်သုံးခု အချင်းချင်း အပြန်အလှန် check and balance လုပ်နိုင်တဲ့ ၀န်းကျင်လေးကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ် ။ အဲ့လို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ကိုလဲ အရမ်းကြိုးစားရပါမယ်။
မေး။ ။ အစိုးရသစ် တက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်လာတဲ့အပေါ်မှာရော အကို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။အခုဟာက ရွေ့နေတယ်လို့တော့ မြင်နေရပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင် နည်းနည်းနှေးတယ်ပေါ့။ အခုလှမ်းလိုက်တဲ့ ခြေလှမ်းကတော့ တော်တော်များများ အားရကြတယ် ။ တော်တော်များများလဲ လွတ်လာကြတယ်ဆိုတော့ ဒါခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းတဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေ ၊ ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေ ရှိနေသေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လာမဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ကျင်းပမယ်ကအစ ရှေ့ဆက်လှမ်းရမဲ့ ခြေလှမ်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။ တကယ်လို့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သွားတယ် ဆိုရင်တောင်မှ ဒါကပြီးဆုံးသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ဖို့ဆိုတာကလည်း အဲ့ဒါတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရအုံးမှာပါ။ အဲ့အတွက် အစိုးရကို ကျွန်တော်တို့က တူတာတွေတွဲလုပ်မယ် ၊ မတူတာတွေလဲ ငြိယူမယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ အတူတူသွားရမှာပါ။
မေး။ ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားတွေ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။အဲ့ဒါကတော့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမဲ့ ကိစ္စ ၊ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး ရှိဖို့က အရမ်းအရေးကြီးတယ် ပစ်ခတ်နေကြတယ်ဆိုတာကလဲ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ကလဲ ဖွင့်ပြောပါတယ်။ သူတို့ အဓိကပြသာနာက နိုင်ငံရေးပြသာနာဖြေရှင်းဖို့ အရေးကြီးတယ်။ နိုင်ငံရေးပြသာနာဖြေရှင်းပြီးသွားရင် ဒီကိစ္စတွေ အလိုလိုပြီးသွားမယ် ဆိုတဲ့ဟာမျိုး အခုဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ တော်တော်လွှတ်ပေးလိုက်တယ် ဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိစ္စတွေမှာ အများကြီးအထောက်အကူပြုမယ်လို့ ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ အဲ့လိုယူဆတဲ့အပေါ် ကျွန်တော်မျှော်လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ၁၂ရက်နေ့တုန်းကဆိုရင် KNUနဲ့ တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လို့ ကျွန်တော်ကြားပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကချင်နဲ့ပဲကျန်တော့မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကချင်ကလဲ အခုအနေအထားမှာ ဒီတစ်ခေါက်ပေးလိုက်တဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို သူတို့ကျေနပ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဘက်မှာလဲ တစ်စုံတစ်ရာ အပြောင်းအလဲဖြစ်လာမယ် လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။
မေး။ ခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီဗွီဘီ ငွေကြေးအလွဲသုံးစားလုပ်သူ( ၂ ) ဦး နံမည်နှင...
ယခု ချိန်ထိ တောင်သူလယ်သမားတွေကို မတရားတာတွေ လုပ်နေ...
ရွှေညဝါဆရာတော်ကို တလအတွင်း သာဓုကျောင်းတိုက်က ဖယ်ပေး...
မြောင်းမြအကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်သောမစန္ဒာမင်း ( ရွှီး...
NLD ပါတီအနိုင်ရရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လှုံ့ဆော်မှု...
ဒီမိုကရေစီလမ်းကလွဲလို့ တခြားရွေးစရာမရှိလို့ ဦးရွှေမ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဂျင်မီ နှင့် ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းေ...
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှ...
တို့ ပါတီ ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ထုတ်လိုက်တဲ့ ဒီလှိုင်း ...
အာဏာရှိစဉ်က ဒေါ်စုကြည် ဆိုပြီးခေါ်ဝေါ် ဒုက္ခမျိုးစုံပေ...
ကိုမင်းကိုနိုင် ရန်ကုန်မြို့ ကိုရောက်ရောက်ချင်းပဲ ...
ဘူးသီးတောင် ထောင်မှ လွတ်လာသူ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားက...